NEWS Archives - Page 2 of 525 - Jowhar somali news leader
Wasiir Beyle oo diiday inuu beri hortago xeer ilaaliyaha…
Master	 Jun 26, 2022
Ra’iisul wasaarayaasha Somaliya iyo Yaman oo khadka…
Ruushka oo gantaalo ku garaacay magaalada Kyiv
Mahad	 Jun 26, 2022
Ajaanib ka tirsan Daacish oo lagu qabtay howlgal ka dhacay gobolka Bari.
Master	 Jun 24, 2022
June 24 (Jowhar.com)-Faah faahino dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgal culus oo saaka ciidamada PSF ee maamulka Puntland ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan buura leyda gobolka Bari.
30 Caruur ah oo saameynta Abaarta darteed ugu geeriyootay Isbitaalka Kismaayo.
June 24 (Jowhar.com)-Isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo waxaa la dhigay caruur aad u da'yar, kuwaasoo laga keenay deegaano kamid ah gobolka Jubbada Dhexe oo ay gabi ahaantiisba maamusho kooxda Al-Shabaab.
Master	 Jun 23, 2022
June 23 (Jowhar.com)-Premier Bank wuxuu fursad u siinayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed ee sanadkan gudanaya waajibka Xajka inay si lacag-la’aan ah ku helaan Mastercard-ka Premier Bank. Wuxuu sidoo kale bankigu muddo 30 maalmood ah ka…
June 23 (Jowhar.com)-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan la qaatay jaaliyadda iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Isu-tagga Imaaraadka Carabta, isaga oo la wadaagay dadaalka ay…
Kusimaha madaxweynaha dalka oo amar culus dul dhigay saraakiisha amniga.
June 23 (Jowhar.com)-Ku-simaha madaxweynaha dalka ahna Guddoomiyaha Golaha Shacabka BJFS Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) ayaa shir gudoomiyey kulan looga hadlaayey Amniga guud ee dalka iyo u diyaar garowga maalmaha xuriyada.
Nin ay Puntland dil ku xukuntay isagoo maqan oo soo hadlay, xog badanna bixiyay.
June 23 (Jowhar.com)-Cabdiraxmaan Shirwac Aw-Saciid oo ku magac dheer (Laahoor) oo todobaadkan maxkamad ku xukuntay dil toogasho isagoo maqan ayaa iska fogeeyay eedaha loo heysto, wuxuuna tilmaamay inuu ku sugan yahay tuulo ka tirsan…
Xubno Shabaab ah iyo hubkii ay wateen oo lagu qabtay gobolka Jubbada Hoose.
June 23 (Jowhar.com)-Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgal qorsheysan oo Ururka 5aad, Guutada 16aad ee Kumaandooska DANAB iyo Ciidanka Hay’adda Sirdoonka & Nabadsugida Jubbaland ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Jubbada…
Ra’iisul wasaaraha magacaaban oo caawa la kulmay Farmaajo iyo Shariif Sheekh Axmed.
June 22 (Jowhar.com)-Ra’iisul Wasaaraha magacaaban ee dalka Xamse Cabdi Barre ayaa caawa sallaan ugu tagay Hoyga Madaxweynayaashi hore ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo Shariif Sheekh Axmed.
Xasan Sheekh oo wadahadal la yeeshay Madaxweynaha Imaaraadka Carabta Sheekh Maxamed Binu Saayid.
Master	 Jun 22, 2022
June 22 (Jowhar.com) - Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan miro-dhal ah la qaatay Madaxweynaha dalka Isu-Tagga Imaaraadka Carabta Mudane Sheekh Maxamed Binu Saayid.
Dood ku saabsan caqabadaha iyo fursadaha ka jira nidaamka caafimaadka oo lagu qabtay Muqdisho.
June 22 (Jowhar.com)- Machadka horumarinta daraasaadka ee Somali institute of developmental studies (SIDS) ayaa magaalada Muqdisho ku qabtay dood cilmiyeed ay kasoo qayb galeen qaar kamid ah dhakhaatiirta dalka iyo maamulada cisbitaalada…
Xasan Sheekh iyo kooxdiisa oo qaaday dhaqan looga bartay maamulkii hore ee Farmaajo.
June 22 (Jowhar.com)- Qaar ka mid ah wafdiga Madaxweyne Xasan Sheekh oo ku sugan dalka Imaaraadka ayaa la soo warrinayaa in laga helay Corona Virus taasi oo maalmo dheeraad ah ku dartay safarka oo qorshihiisa hore ahaa laba maalmood.
Sawirro: Faysal Cali Waraabe oo Nairobi kula kulmay Gaas iyo Cumar C/rashiid + hadal heyn ka dhashay…
June 22 (Jowhar.com)- Gudoomiyaba xisbiga mucaaradka ah ee UCID Faysal Cali Waraabe ayaa la kulmay Madaxweynihii hore ee Puntland C/weli Gaas, Ra'iisalwasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar C/rashiid & Ra'iisalwasaare ku xigeenkii hore ee…
Wararkii u danbeeyay Soomaali badan oo lagu dilay dalka Itoobiya iyo xaaladda oo kacsan.
June 22 (Jowhar.com)- Wararka ka imanayo dalka Itoobiya ayaa sheegaya in kudhowaad 10 qof oo Soomaali ah la dilay, waxaana sidoo kale dhac baahsan loo geystay xoolo ay wateen.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo loogu baaqay inuu wadahadal la galo Shabaab.
June 22 (Jowhar.com)- Hay'adda xasaradaha caalamka ee loo soo gaabiyo ICG ayaa faahfaahin ka bixisay dhibaatooyiinka ka dhashay dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabab, xilli dhanka kalena ay ku talisay hay'addani in wakhti xaadirkan ay…
Faah faahino laga helayo dib u dhaca kulanka ra’iisl wasaaraha lagu horgeynayo baarlamaanka.
June 22 (Jowhar.com)- Waxaa maanta dib u dhac uu ku yimid kulan balaaran oo lagu waday in golaha shacabka lagu horgeeyo ra'iisul wasaaraha magacaaban ee dalka Xamse Cabdi Barre, waxaana warar dheeraada laga helayaa sababaha keenay…
Gudoomiyaha golaha shacabka oo dalka dib ugu soo laabtay, kana hadlay safarkiisii Nairobi.
June 22 (Jowhar.com)- Guddoomiyaha Golaha Shacabka Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya mudane Sheikh Adan Mohamed Nur-Madobe oo maanta dalka dib ugu soo laabtay ka dib safar qaatay dhowr maalmood uu ugu maqnaa magalada Nairobi ee dalka…
Previous 1 2 3 4 … 525 Next
hanad	 Jun 26, 2022
Tehran and EU say US-Iran nuclear talks will resume “within the…
Macron asks Prime Minister Elizabeth Bourne to suggest a brand new…
Polish and Ukrainian activists march for LGBT rights in Warsaw